မင်းနဒီခ ● ကဗျာ၊ ကဗျာဆရာရပ်တည်မှုနှင့် ကဗျာဖတ်သူရှုထောင့် | MoeMaKa Burmese News & Media
မြန်မာကဗျာသမိုင်းကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ပုဂံခေတ်ကနေ ကိုလိုနီခေတ်တစ်ပိုင်း၊ ခေတ်စမ်းကဗျာ (၁၉၃၀ – ၁၉၄၅)မှ ခေတ်ပေါ်ကဗျာခေတ်ဦး ( ၁၉၇၀ -၁၉၉၀)ထိတစ်ပိုင်း၊ ခေတ်ပေါ်နှောင်းပိုင်း (၁၉၉၀ -၂၀၁၀) မှသည် ယခု ဒီဘက်နှစ်များ (၂၀၁၀- ) ခေတ်ပေါ်/ ခေတ်ပြိုင်၊ Contemporary အထိ ကဗျာဟာ တစ်ခေတ်ပြီး တစ်ခေတ် ရွေ့နေဆဲပဲဖြစ်သည်။ ခေတ် ကာလတွေ၊ ကဗျာနည်းစနစ်တွေ မည်သို့ပင်ပြောင်းလဲစေကာမူ မပြောင်းလဲသည့်အရာ တစ်ခုတော့ ရှိသည်။ ထိုအရာသည် ကဗျာဆရာ၏ ရပ်တည်မှုနှင့် အမှန်တရားအပေါ် ချစ်မြတ်နိုးစိတ်၊ အကောင်းမြင် စိတ်နှင့်စေတနာဖြစ်သည်။ ခေတ်ပေါ်ဖြစ်စေ၊ ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်စေ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်လိုက်သည်နှင့် အဆိုပါကဗျာသည် မည်သူ့ဘက်မှ ရပ်တည် သည်၊ မည်သည့်စိတ်ဖြင့် ကဗျာကို တည်ဆောက်ထားသည်။ ကဗျာနောက်ခံအခင်းအကျင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သည် မည်သည့်ခေတ်ကာလကို ကိုယ် စားပြုပြီး ရေးဖွဲ့ထားသည်ကို ကဗျာဖတ်သူက စူးစမ်းလေ့လာနိုင်သည်။ ကဗျာဖတ်သူသည် ကဗျာဖတ်ကျင့် ရှိသလောက် ကဗျာ၏အကျယ်အဝန်းကို ချဲ့ထွင်သွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ကဗျာဖတ်သူ၏ အမြင်/ကဗျာဖတ်သူ၏ ရှုထောင့်သည် ကဗျာ ကောင်း၊ မကောင်းကိုပါ တဆက်တည်း ဆွဲတင်၊ ဆွဲချပြုလုပ်သွားနိုင်သည်။ ကဗျာဆရာသည် ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ရေးသားပြီး ကတည်းက သူ၏ကဗျာအပေါ် ပြုလုပ်မှုဖြစ်စဉ်သည် ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။ ထိုကဗျာ၏ နောက်ဆက်တွဲ ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်းသည် ကဗျာဖတ်သူ၏ ကဗျာကိုယ်ခံအားနှင့် ကဗျာအပေါ် အကဲဖြတ်နိုင်မှုရှုထောင့်မှာ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီနေရာတွင် ခေတ်ပြိုင်ဟန်ကဲသည့် ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ကဗျာဖတ်သူ ရှုထောင့်မှ ပြန်လည်တင်ပြချင်မိသည်။
ခုထိ …. စစ်ဟာ ကခုန်နေတယ်၊
ခုထိ …. စစ်ဟာ ကခုန်နေတယ်။
‘ဒီနေရာမှာ ကဗျာထဲမှာ အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်သည့် စစ်သည် ဘာကြောင့် ကခုန်နေသည်ကို ကျွန်တော်တို့ ကဗျာဖတ် သူရှုထောင့်ကနေ ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်မိသည့်အခါ စစ်ကို ဥပဒေအတိုင်း အဆုံးစီရင်လိုက်သည် ဆိုသော်လည်း တကယ်တမ်း ကျတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးသွင်သွင်အော်နေတာလည်း ဒီလူတွေပဲ။ နယ်ချဲ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကာကွယ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ထိုးစစ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ခံစစ်ဖြစ်ဖြစ် စစ်ကို အပြန်ပြန်အထပ်ထပ်အသက်သွင်းနေတာလည်း ဒီလူတွေပဲ ဖြစ်သည်။ စစ်ကတော့ ဆက်လက်ပြီး ကခုန်နေဆဲ။ ဒီလူတွေရဲ့ သွေးပြန်ကြောထဲကနေ ပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာနဲ့ ကခုန်နေဆဲပဲဖြစ်သည်။ ဒီအရေး အသားသည် ကဗျာရေးသူမှ စစ်အကြောင်းကို ပြောနေရင်းနှင့် ရုတ်တရက် ကဗျာဖတ်သူ ရဲ့လက်ဖျံကို ဆွဲလှန်ပစ်လိုက်သည့် အရေးအသားဖြစ်သည်။ “စစ်က အပြင်မှာမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ ၀ိညာဉ်ထဲမှာပဲ ကိန်းအောင်းနေပါတယ်”ဟု ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဝင်စတန်ချာချီက ‘စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာ ရှုံးတာနဲ့နိုင်တာ တစ်ခုပဲ ရှိရမယ်။ ရှုံးလည်း မရှုံး၊ နိုင်လည်း မနိုင်ပဲ နှစ်တွေအကြာကြီး တိုက်နေပြီ ဆိုရင် အဲဒါဟာ လုပ်စားနေတာပဲ’ဟု ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်မည်။ ဒါက ဒီကဗျာနှင့်ပတ်သက်လို့ ကဗျာဖတ်သူတစ်ယောက်၏ ရှုထောင့်မှ နားလည်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်လည်း ရှိပါသေးသည်။
“လူတွေက စစ်ပွဲတွေကို ခြောက်လှန့်ပစ်မယ့်
ဇိုင်းအောင် – ခေါင်ရှောင် – မဂယမ်
Tags: ကရင်, ချင်း, မင်းနဒီခ, မွန်, ပြည်တွင်းစစ်
မောင်စွမ်းရည် ● ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသော စစ်သားကြီး (0)